आज मङ्सिर २४ गते बुधबार , कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! - News21Nepal
news21nepal December 8, 2020 1 min read
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Ariesसेवा र सद्गुणको काममा मन लाग्नेछ। मानसिक रूपले कार्यभार अधिक रहनेछ। सत्कार्यको नतिजाको रूपमा तपाईं शारीरिक र मानसिक रूपले स्फूर्त महसुस गर्नुहुनेछ। आर्थिक लाभको सम्भावना छ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ।
तपाईंको बोलीले कसैलाई आकर्षित गर्नसक्छ र यो तपाईंको लागि लाभदायक हुनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि दिन शुभ रहनेछ। परिश्रम अनुरुप कम सफलता मिल्नाले मन चिन्तित रहला। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ध्यान दिनुहोला। खानपानमा पनि ध्यान राख्नुहोस्।
पानी तथा अन्य तरल पदार्थबाट टाढा नै रहनुहोला। शारीरिक तथा मानिसिक अस्वस्थता रहन सक्छ। यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। अनावश्यक वाद-विवादमा नपर्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा परिस्थिति सोचे जस्तो अनुकूल नरहला।
तपाईंको लागि यस दिन अनुकूल रहनेछ। नयाँ कार्य आरम्भ गर्नको लागि दिन शुभ रहनेछ। साथीहरू र प्रियजनसँग भेट हुनाले मन प्रशन्न राह्नेछ। कार्यक्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्नेछ। समाजमा मान-सम्मान बढ्नेछ। रमणीय यात्राको सम्भावना छ।
तपाईंको लागि यस दिन मिश्रित फलदायी रहनेछ। तपाईं परिवारका सदस्यहरूसँग आनन्दमय समय बिताउन सक्षम हुनुहुनेछ। आर्थिक क्षेत्रमा आयभन्दा व्यय बाढी रहनेछ। मधुर बोलीले तपाईं अरुलाई प्रभावित पार्न सक्नुहुनेछ। कार्य आयोजना सफलताका साथ पूरा हुनेछ।
शारीरिक तथा मानसिक रूपले तपाईं स्वस्थ रहनुहुनेछ। परिवारमा उल्लासमय वातावरण रहनेछ। शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। रमणीय यात्राको मौका मिल्नाले मन प्रशन्न रहनेछ। तपाईंको बोलीले अरु मानिस प्रभावित हुनेछन्। कार्यक्षेत्रमा समय अनुकूल रहनेछ।
तपाईंको लागि यस दिन प्रतिकूल रहनेछ। स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। मानसिक रूपमा पनि अस्वस्थ महसुस गर्नुहुनेछ। क्रोध तथा वाणीमा संयम राख्नुहोला। तपाईंको खर्च आयभन्दा बढी हुने सम्भावना छ। आर्थीक पक्ष कमजोर रहला।
तपाईंको लागि यस दिन लाभदायक साबित हुनसक्छ। साथी-भाईसँग रमाइलो भेटघाट हुनुका साथै रमणीय यात्रामा जाने अवसर मिल्नेछ। व्यवसाय क्षेत्रमा आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना छ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तपाईंसँग प्रशन्न रहनेछन्।
कार्य सफलताको दिन छ। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागे दिन शुभ रहनेछ। व्यापार व्यवसाय बिस्तार हुनेछ। कर्यक्षेत्रमा समय अनुकूल रहनेछ। पदोन्नतिको योग रहेको छ। परिवारमा सकारात्मक वातावरण रहनेछ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ।
लेखन तथा साहित्य क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। शारीरिक थकानको महसुस गर्नुहुनेछ। सन्तान सम्बन्धि समस्या चिन्ताको कारण बन्नसक्छ। लामो यात्राको सम्भावना छ। अनावश्यक वाद-विवादमा नपर्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल नरहला।
वाणी तथा क्रोधमा संयम राख्न जरूरी देखिन्छ। अनैतिक तथा निषेधात्मक कार्यबाट टाढा नै रहनुहोला। खर्चमा वृद्धि हुनाले आर्थिक स्थिति कमजोर हुनसक्छ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्ने सम्भावना छ।
लेखन तथा कला क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समय अनुकूल रहनेछ। आफन्त तथा मित्रगणसँग स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजनको अवसर मिल्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान बढ्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ।
Tags: आज मङ्सिर २४ गते मंगलबार कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
Previous तपाईंको आजको दिन कस्तो छ ? आजको पुरा रासिफल हेर्दै ॐ लेखेर सेयर गर्नुस मन ले चितायको पुग्ने छ,
Next राशिफल २०२१: कुन राशिमा कस्तो रहला ग्रह दशा प्रभाव ? कुन रासिलाइ कति शुभ , पूरा हेर्नुहोस् !